कन्काईमा छोेरी पढाऊ बढाऊ कार्यक्रम सुरु
बिर्तामोड-कन्काई नगरपालिका–६ ले छोरी पढाऊ बढाऊ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । छोरा र छोरीबीच बढ्दो विभेद हटाउनका लागि कनकाई नगरपालिकाको वडा नं. ६ ले ‘छोरी पढाऊ बढाऊ’ कार्यक्रम सुरु गरेको वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ओलीले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मना साथ सो परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष ओलीले बताए । सो रकम भर्खर जन्मिएको छोरी र आमाको नाममा मुद्दती खातामा राखिने र उक्त रकम १५ वर्षपछि छोरीको विवाह वा शिक्षाका लागि प्रयोग गर्न पाइने ओलीको भनाइ छ ।
यसका लागि वडा समितिको वार्षिक बजेट तथा आफ्नो र वडा सदस्यको तलब भत्ताबाट सो कोषका लागि रकम जम्मा गरिनेसमेत कनकाई नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ओलीले बताए । वडा नं. ६ ले छोरी ‘पढाऊ–बढाऊ’ कार्यक्रमको कार्यविधि–२०७५ सार्वजनिक गरेको वडाध्यक्ष ओलीले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यविधि–२०७५ पारित गरी जारी गरेको ओलीले बताए ।